News Collection: यसपालि पनि लगन जुरेन
यसपालि पनि लगन जुरेन
यसपालिको मंसिरमा पनि लगन नजुरेका नायिकाहरू भन्ने गर्छन्- बिहे गर्न केको हतार ?
काठमाडौं/ मंसिर, बिहेको मौसम　। तर, नेपाली फिल्ममा यद्यपि चल्तीमा रहेका केही अविवाहित नायिकालाई भने यसपालिको मंसिरले पनि लगनगाँठो कसाइदिएन　। गत वर्ष मंसिरको लगनमा ऋचा घिमिरे बिहेबन्धनमा बाँधिएकी थिइन्　। तर, यसपालि भने चलेका कुनै हिरोइन पनि श्रीमती बनेको खबर सुन्न पाइएन　।
बिहे गर्न उमेरको पावन्दी नभए पनि उषा पौडेल, रेजिना उप्रेती, पूजना प्रधान र नन्दिता केसीको 'पराइ घर जाने' उमेरले भने नेटो काट्न थालिसकेको छ　। यिनीहरूले यस वर्षको मंसिरको लगन पनि टारेका छन्　।
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा एक दशकदेखि क्रियाशील यी नायिका अविवाहित छन्　। आमसेलिब्रेटी बिहे गर्‍यो या गरेको थाहा भयो भने आफ्नो क्रेज घट्छ भन्ने भ्रममा रुमल्लिएका हुन्छन्　। यी अविवाहित नायिकामा पनि यो भ्रम व्याप्त छ　।
'अहिले नै बिहे गर्न के हतार ?' नन्दिताको भनाइ छ, 'करिअर बनाउँदै छु　। अझै चार/पाँच वर्ष बिहे गर्ने योजनै छैन, मेरो　।' आफूलाई बलिउड अभिनेता शाहरुख खानजस्तो बेहुलो चाहिने बताउने गरेकी नन्दिताले 'शाहरुखजस्तो' केटो नभेटेर पो बिहे नगरेकी हुन् कि ? 'होइन, मैले खोजेकै छैन　। खोजेँ भने त भेटिएला नि !' उनी भन्छिन्, 'केही वर्षलाई बिहेबन्धनबाट टाढै रहन चाहेकीले पहल नगरेकी हुँ　।' 'अरूले जेसुकै गरून्, मलाई बिहे गर्न हतार छैन,' अर्की नायिका रेजिना उप्रेती जतिवटा मंसिर आए-गए पनि आफू नआत्तिने बताउँदै भन्छिन्, 'म करिअरकै चिन्तामा छु　। बिहे भन्ने कुरा देखेर हँुदैन, लेखेकै हुनुपर्छ　। त्यसकारण म यो भाग्यकै भरमा छाड्छु　।' हालै सतुंगलमा जग्गा किनेकी रेजिना घर बनाएपछि मात्रै बिहेबारे सोच्ने बताउँछिन्　। 'बल्ल-तल्ल घडेरी किनेकी छु　। घर बनाएर सेटल भएपछि मात्रै बिहेको योजना बनाउनुपर्ला,' आफूलाई घरपरिवारबाट बिहे गर्न दबाब आइरहने गरेको बताउँदै उनले भनिन्, 'बुबाआमा त सधैँ बिहे गर्, बिहे गर् भन्नुहुन्छ नि ! तर, अचेल उहाँहरूले मेरो कुरा बुझ्नुहुन्छ　। मैले गरिरहेको कामबाट उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ　। त्यसकारण अचेल बिहे गर् भनेर दबाब दिन छाड्नुभएको छ　।'
अर्की अविवाहित नायिका उषा पौडेललाई पनि लगन छुट्ला भन्ने चिन्ता छैन　। 'बिहे निकै सोचविचार गरेर गर्नुपर्छ　। हतारमा बिहे गरेर फुर्सदमा पछुताएका साथीहरू धेरै देखेकी छु मैले,' उनको भनाइ छ, 'त्यसकारण म हतारिएर बिहे गर्ने पक्षमा छैन　।'
केही वर्षयतादेखि धर्म-कर्ममा लीन भएकी अर्की नायिका पूजना प्रधान पनि बिहे गरिहाल्ने योजनामा नरहेको बताउँछिन्　।
जय संगत अभियानमा लागेकी उनी बिहे नगरीकनै जिन्दगी पार गर्न पनि सकिने धारणा राख्छिन्　। 'बिहे गर्नैपर्छ भन्ने छैन,' उनको तर्क छ, 'यो संसारमा धेरै त्यस्ता स्त्री, पुरुष छन् जसले बिहे नगरीकनै जिन्दगी बिताएका छन्　। मेरो सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन सक्छ　।' भविष्यमा बिहे गर्ने दिन आउन सक्ने भए पनि आजसम्म भने आफूले बिहे गर्ने योजना नबनाएको बताउँछिन्, उनी　। फिल्मक्षेत्रमा अन्य थुप्रै नायिका अविवाहित छन्　। कतिपयले त बिहे गरेर डिभोर्स पनि गरिसकेका छन् भने केहीलेे दोस्रो बिहे पनि गरेका छन्　। अधिकांश अविवाहित नायिका बिहे नै नगरे पनि बिहेबराबरको सम्बन्धमा भने रहेका छन्　। रेजिना उप्रेती १० वर्षदेखि निर्देशक शोभित बस्नेतसँग प्रेममा छिन्　। उषा पौडेल बलिउड नायक राहुल रोयसँग प्रेममा भएको हल्ला चल्ने गरेको छ　। पूजना प्रधान र पुष्पराज पुरुष पनि केही वर्षअघिदेखि निकै निकट छन्　। अर्की नायिका नन्दिता केसी र निर्माता वसन्तकुमार श्रेष्ठको सम्बन्धको पनि निकै चर्चा हुने गर्छ　। अधिकांश अविवाहित नायिकाले गर्ने गरेको प्रतिप्रश्न- 'बिहे गर्न केको हतार ?' मा उनीहरूको निकटतम् सम्बन्ध नै रहस्य भएको लख सजिलै काट्न गाह्रो छैन　।